Ubuchwepheshe, Ikhebula Satellite TV
Njengoba sekunama-okuqukethwe digital abalandeli amaningi umkhiqizo ithelevishini ushintshe Vector yezifiso yayo maqondana ithelevishini digital. Yeka okuhlangenwe ukuthuthukiswa esebenzayo kulendawo emenza inqwaba abalandeli kanye nezinkampani izoxhumanisa futhi ulungiselele TV digital ngemali ethile. Kodwa lo rush akuyona zinkulu. Akubona bonke njengoba kunzima njengoba kungase kubonakale efika kuqala. Kungenzeka ukuba babhekane bebodwa nodaba kanjani ukusetha i-TV sedijithali TV digital.
Okokuqala, kudingeka ucabangele ngokuningiliziwe isimiso ukubeka njengoba enjalo, bese uqhubeke ukuze usethe i-TV amafemu ezahlukene. Okwamanje, kukhona tinhlobo letehlukene ithelevishini digital. Izinketho ezihlongozwayo kukhona ngqo okuhlobene ikhebula "sibalo".
Indlela TV digital?
kakhulu Inqubo ithelevishini oludijithali ividiyo bese isignali umsindo TV ngokuqondile umhumushi. Lokhu isebenzisa ukushintshashintsha kwezwi digital kanye kokucindezelwa ezithile kwemininingwane ngocansi.
Ukuze uqalise ukunquma ngokuqinile ukuthi ngeke sihlinzeke izinhlelo ezikhethiwe, angena esivumelwaneni ukuxhuma iphakheji edingekayo iziteshi. Khona-ke sithola isethi edingekayo ukuze lelisu lobuchwepheshe. Lingena ikhebula fibre optic futhi ukuguqulwa ledzingekako aduduze. Isibalo amabhokisi set-top kuzoncika inani TV axhunyiwe. Fibre optic ikhebula kuyadingeka ukuba cindezela futhi ngobumnene abavamile ukuba sigweme pinched.
Indlela uxhume ku-TV yakho?
Kubantu, okokuqala ubhekene nesimo esifanayo, kanye kukhona inombolo ethile imibuzo kumele iphendulwe: Yini edingekayo ukuze TV digital ithelevishini eliwumhlaba? Indlela ulungiselele ukuthi? Ziyini izindleko? Ngaleso sikhathi, yempendulo phezu. Kuyinto TV yakho njalo, inhlanganisela yezimpawu esezingeni ongakhetha: analog zokufakwayo (cinch), S-Isiqophi-okokufaka, scart-input bese yokufaka antenna. Akubalulekile isikhathi eside ukukhuluma kanjani ukuze usethe owamukelayo ithelevishini digital. Vele ufaka amakhebula isixhumi okhethekileko ibhokisi set-top, kube komunye umkhawulo womhlaba ufakwa slot ezifanele ku-TV.
Udinga ukuxhuma amandla bese ucindezela inkinobho «Amandla». sokucinga oku-othomathikhi amashaneli TV bese ukhetha imvamisa aduduze stop ukuskena. Isikrini-top box imenyu.
I-Flowchart futhi umahluko amathebhu onobuhle ezahlukene TV ziyahluka kancane. Ngakho-ke, kuyafaneleka kokukhuluma indlela yokumisa yokwamukela ithelevishini digital, kungakhathaliseki imodeli TV ezikhethiwe.
Faka imenyu ye-TV. Khetha ithebhu "Izinketho" ewindini pop-up. Bheka "Ukulungiswa ngokuzenzakalela" kuyinto ushintsho ngqo kulungiselelwa. Ku-window olandelayo - "Umthombo Ukukhethwa" - ukunquma inguqulo "ikhebula". inkinobho "Qala" uzogcwalisa kulesi sigaba. Ngenxa yalokho, izinguqulo eziningana "Ukucinga Mode" nto, ukhethe into "esigcwele". Inkambu net, faka lezi idatha:
Imvamisa (kHz) - 314 000 (314 MHz);
Ukushintshashintsha Kwezwi - 256 Unjiniyela: QAM;
ngesivinini transmission - 6875 KS / s.
Ezinye amasethi TV anemisila umsebenzi "Inethiwekhi". Lokhu lula kakhulu umbuzo kanjani ukusetha i-TV sedijithali TV digital. Kwanele ukhethe imodi oyifunayo, qhubeka ngokucindezela "Ukucinga" inkinobho.
Silungisa TV LG
Manje sibheke ukuthi ungasetha kanjani TV digital ku-LG TV digital. Njengoba sazi ukuthi onobuhle ehlukahlukene ithelevishini kusukela kule nomkhiqizi ungaba firmware yabo futhi imenyu, wenze nje esidumazayo, njengoba wonke amamodeli we-inkampani efanayo njalo izici isici. Ngakho-ke, ungakwazi ukuqonda kalula. Walkthrough iqala elawulwa kude futhi inkinobho «Imenyu» kuso. Ngemva kokuchofoza ewindini esivula, ukhethe into "Izinketho".
Tab "Izinketho" inikeza izinketho eziningana, eziningi zazo kuyodingeka ukhethe "Izwe". Kule ngxenye, kufanele lukhombise ezweni eJalimane noma eFinland.
Khona-ke "Izilungiselelo" kumelwe sibuyele emuva imenyu. Sisebenzisa ukhetho "Auto", okukhombisa indlela uxhumano "Ikhebula". ukukhishwa Ngokulandelana kweticondziso kuzovumela TV ukuthola ukumisa zonke iziteshi ezitholakalayo.
Kukhona imininingwane ehilelekile ezincane, okuyinto kufanele kunakwe lapho ukubeka isiteshi - umsebenzi khona, iinthombe okuyinto phinda izilungiselelo Isiteshi esikhona nokusesha luqala. Kungcono ukugwema ukusebenzisa lo msebenzi. Esikhathini ithebhu "Ukumisa ikhebula digital" kwenza off inketho. Ngemva kokufunda ukuthi ungasetha kanjani amashaneli kamabonakude wedijithali TV LG nokubonisa ukunakekelwa kancane, impela nje iziteshi tune ngokuzimela.
Silungisa TV Philips
Ngo imiyalelo ngezansi, sizogxila indlela yokumisa kahle ithelevishini wedijithali TV Philips.
Ekuqaleni, kukhona inkinobho «Imenyu», esisogwini elawulwa kude bese ufaka imenyu ye-TV. Isinyathelo esilandelayo ukuze ukhethe ithebhu "yoMiso" futhi emnyango kulesi sigaba. A ibhokisi lengxoxo sizonikeza izinto ezimbalwa, enye yazo nto "Ukubeka". Ukuchofoza lento ushayele menu yesibili esikrinini TV. kwesigaba Kuyadingeka - "kokumiswa kwesiteshi". I menyu engaphansi elandelayo ivela ithebhu ezidingekayo "Izilungiselelo okuzenzakalelayo". Ngenxa elandelanayo ukuhwebelana lesifanele phakathi kwamathebhu liyavela Ukuvuselela okwalandela uhlu iziteshi ezitholakalayo. Khetha "Qala".
kufanele kube "Izwe" kwesigaba ngemuva kokukhetha "Setha kabusha isiteshi". Kusukela uhlu lamazwe, njengoba kunjalo ne LG-TV, khetha Finland noma eJalimane. Ekunqumeni ukuthi ukuxhuma ubeka luphawu "ikhebula".
Uma ubheka indlela ukusetha i-TV sedijithali TV digital, kwakulula, ungaqala ukusesha ngokucindezela isiqu isiteshi "Thumela".
Silungisa ku Samsung TV
Yonke inqubo yokusetha yenziwa ukulawula ngqo akude. Ngokucindezela «Imenyu» ushayele ithebhu imenyu ye-TV. Esikhathini "kwesiteshi", etholakala ngaphansi isithombe a satellite dish, ohlangothini kwesokudla kwesikrini kuzovula amathebhu amaningi. Bathola into "Antenna" futhi chofoza kukho, futhi lapho ukhetha uhlobo loxhumano, kubhekiselwa kuzo 'njengamadoda ikhebula ". Ngemva kokushintshela ithebhu "Izwe" ukhethe "Okunye". Ngenxa yalokho izinyathelo ezingenhla iwindi lizovela eceliwe pin ikhodi. Inani ezizenzakalelayo pin ikhodi 0000.
Esikhathini ithebhu "ngokuzenzakalela Tuning" umthombo isignali kuyoba "ikhebula". kumelwe cindezela "Ukucinga" ekupheleni Ukukhetha ezilandelanayo amathebhu. Ngokuqinisekile TV uthola zonke iziteshi okwamanje.
Ukubeka phezu Toshiba TV
On Toshiba TV lonke isethaphu inqubo ngokuyinhloko lula. Siya imenyu ye-TV bese ukhetha isiRashiya. Udinga ukuthola ithebhu «DTV Manual Tuning". Ngemva ukwethulwa izilungiselelo ucindezele okuthi "KULUNGILE", bese iqala kwencazelo iziteshi ezitholakalayo.
Ngaphezu kwalokho, i-TV digital kanti uyatholakala kwi-computer siqu.
Ibhulogi emayelana movie
Indlela yokuthola imvume yokuhlala eRussia: uhlu oludingekayo lwamadokhumenti